Fly Dubai oo so rasmi ah u qiratay inay u hoggaansantey xayiraaddii DF Somalia (Wadahadal socda oo dhinacyo badan) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Fly Dubai oo so rasmi ah u qiratay inay u hoggaansantey xayiraaddii...
Fly Dubai oo so rasmi ah u qiratay inay u hoggaansantey xayiraaddii DF Somalia (Wadahadal socda oo dhinacyo badan)
(Dubai) 25 Abriil 2020 – Shirkada Imaaraatiga ah ee Fly Dubai ayaa qiratay inay u hoggaansantey amarkii kasoo baxay DF Somalia ee dhamaadkii bishii Maarso lagu hakiyey duullimaadyada caalamiga ah.
Dayuurad ay lahayd Fly Dubai ayaa waxaa qabtay raadaarka DF Somalia, taasoo lagu amray inay dib ugu noqoto halkii ay ka timid, isla markii ay soo gashay hawada Somalia, taasoo ay u hoggaansantey, iyadoo rakaabkii ay siddey dib ugu celisey magaalada Dubai 19-kii Maarso oo uu bilaabmayey dhaqangalka hakadka ay soo rogtey DF.
Fly Dubai oo samaysa duullimaadyo isku xira Dubai iyo Hargaysa ayaa iminka wada hadallo kula jirta maamulka Somaliland, sida ku cad xog aannu ka helnay magaalada Hargaysa.
Hadalsame Media ayaa fahamsan in Somaliland ay aad ugu foorjoowdey tillaabadaa ay qaadday Fly Dubai oo aan iska indhi tari karin xeerka caalamiga ah, balse iminka doonaysa inay Somaliland la meel dhigto dib usoo celinta duullimaadyadaasi mustaqbalka dhow.
Warar kale ayaa sheegaya in Fly Dubai oo sharci ahaan ku diiwaan gashan magaca Dubai Aviation Corporation, ayaa waxaa iska leh Dowladda Imaaraadka, waana dayuuradaha tigidhadooda jaban yihiin (Budget Airline), ay rukhso waydiisan doonto Waaxda Duullimaadyada Rayidka ah (SCAA) ee DF Somalia.
Yeelkeede, maamulka Somaliland ayaa ku doodaya in uu hawadiisa u madax bannaan yahay oo aanay hawadiisa xayiri karin DF Somalia.
Previous articleSOMALIA & IMAARAADKA: Laba sano oo khilaaf ah kaddib yaa gacanta sare leh?
Next articleSAWIRRO: Cumar Filish oo la kulmay qoysaskii laba qof oo xalay Muqdisho lagu toogtey & dibed baxayaal ka dhiidhiyey (Booliiska oo soo bandhigay eedaysanaha)